Diplomasi Ka Hadlay Musuqa Doorashada – Goobjoog News
Diplomasi Ka Hadlay Musuqa Doorashada
Diplomasi Soomaaliyeed ayaa sheegay in beesha caalamka ay aqoonsiga kala laaban karto dowladda federaalka haddii doorashada madaxweynaha ay musuq ku dhacdo.
Diplomasi Maxamed Maxamuud ayaa Goobjoog News u sheegay in warbixinta dhowaan la soo saaray ee lagu sheegay in Soomaaliya ay kamid tahay wadamada ugu horreeya musuqa iyo laaluushka xilalka lagu helo ay wax ka jiraan.
“Waxaad mooddaa in beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed baarlamaanka la soo doortay in farta ay ku wada fiiqayaan oo baarlamaanka oo dhan lama oran karo musuq buu ku yimid, hase yeeshee 70 kursi baa cabsi laga qabaa, guddiga khilaafaadkuna 5 kursi ayay leeyihiin marka dowladdani waxay beesha caalamka u heysataa inay tahay dowlad ku soo caan baxday musuqmaasuq” ayuu yiri Diplomasi Maxamed Maxamuud.
Dhanka kale, Beesha caalamka ayuu sheegay inay ku hanjabtay inay aqoonsiga dowladda kala laabanayso haddii doorashada madaxweynaha ay musuqmaasuq ku dhacdo.
“Arrinta doorashada madaxweynaha waa ay adkaaneysa maadaama dalka abaaro ay ka jiraan” ayuu sidoo kale yiri Diplomacy Maxamed Maxamuud.
Hadalkaan Diplomasiga ayaa ku soo aadayaa iyadoo dhowaan dowladda federaalka lagu eedeeyay inay kamid tahay dowladaha ugu musuqa badan caalamka oo masuuliyadda lacagi lagu raadiyo.
Halka hoose ka dhageyso wareysiga
Xabad Joojin La Kala Dhex-dhigay Beello Ku Dagaallamay Sh/dhexe
Faahfaahin Khasaare Ka Dhashay Qarax Ka Dhacay Wanlaweyn
greatly common [url=http://cialislet.com/#]cialis australia[...
clean morning [url=http://cialislet.com/#]tadalafil 20mg low...
abroad wheel [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra sa...
new click [url=http://cialislet.com/#]buy cialis online over...
viagra women sale australia coupon for cialis by manufacture...